Goorma ayaa FTC ay Lacag Ku Noqon Doontaa Ogolaanshaha Dadka Caanka ah? | Martech Zone
Digniinta ka soo baxday Guddiga Ganacsiga ee Federaalka ayaa leh ayaa loo diray, in kabadan 90 emayl toos ah oo loogu talagalay suuqleyda iyo saameyntooda, oo ay kujiraan jilayaasha iyo muusikada sida Kendall Jenner, Emily Ratajkowski, Hailey Baldwin, Sofia Vergara, Lindsay Lohan, Sophia Bush, Zendaya Coleman, Jennifer Lopez, Luke Bryan, iyo Sean Combs.
Waxaan ka qornay bixinta kahor, laakiin wali waxaan layaabay tirada saamileyaasha dayacaya inay la wadaagaan xiriirka lacageed ama ganacsi ee ay la leeyihiin shirkadaha ay ka hadlayaan. Markaan qabo isku xirnaanta walxaha shirkad, waxaan ka shaqeeyaa inaan shaaca ka qaado xiriirkaas heerar dhowr ah:
Qayb kasta oo ka kooban Waan daabacayaa, ha noqoto mid tweet ah ama qoraal buuxa, in yar ayaa laga xusi doonaa inay yihiin macmiil ama haddii aan nahay gacansaar, wadaagno xayeysiin, ama ay yihiin kafaala-qaadayaal.
Dhamaan bogaggayga, Waxaan la wadaagayaa magacyada shirkadda aan la shaqeeyo. Waxaad arki doontaa astaamahayga kafaala qaadayaasha oo wareegaya hoosta.
Xitaa aniga Terms of Service wuxuu sheegaa in badanaa aan ka hadlo macaamiisha ama aan leeyahay xiriir lacageed iyo inaan shaaca ka qaado. Waxaa muhiim ah in la ogaado in guud ahaan TOS aysan daboolin tilmaamaha FTC, in kastoo!
Waxaan dareemayaa inaan ahay mid ka mid ah kuwa yar, in kastoo.
Soo bandhigid aan mugdi ku jirin oo aan qarsooneyn
Labadaas eray waxay fure u yihiin tilmaamaha FTC. Si kastaba ha noqotee, waxaan dhageystaa Podcasts, waxaan daawadaa fiidiyowyada tooska ah, oo waxaan u akhriyaa cusbooneysiinta bulshada maalin kasta hoggaamiyeyaasha warshadaha suuq geynta halkaasoo aysan xitaa shaaca ka qaadin xiriirkooda lacag-bixineed ee ay la leeyihiin iibiyeyaasha, shirarka, iyo xitaa macaamiishooda. Toddobaadbaadka usbuuc ka dib, way ka wada hadli doonaan adeegsiga aaladda oo waxay kor u qaadeysaa shirkadda qalabkaas inay tahay macmiil iyaga ah. Marka laga soo tago ku xadgudubka tilmaamaha FTC ee ku saabsan shaacinta, waa wax u dhima dhagaystayaashooda iyo bulshada.
Kaliya taasi maahan wax dhib badan, waxaan leeyahay shirkado xiriiriyayaal xiriirin oo si joogto ah ila soo xiriira oo raba inay i siiyaan lacag si aan u dhigo backlinks dhexdeeda mawduucayga iyo ma codsadaan in la shaaciyo. Marwalba waxaan si cad ugu weydiiyaa jawaabaheyga haddii ay i weydiinayaan inaan si toos ah ugu xadgudbo tilmaamaha FTC ee ku saabsan shaacinta. Marnaba ma helayo jawaab dabagal ah.
kuwii emaylka digniinta ah ee laga soo diray FTC ahaayeen toogasho digniin ah guud ahaan qaansada warshadaha oo dhan. Qofna yuusan iska indhatirin xaqiiqda ah inay ku dhawaaqeen isla markaana dhiirrigeliyeen dirista emayllada sidoo kale. Nasiib darrose, digniinta waxay umuuqataa mid aan la dareemin waxaana laga yaabaa inay tahay waqtigii FTC ay tusaalooyinka qaar ka bixin lahayd labada qof ee caanka ah, kuwa saamaynta ku leh suuqgeynta suuqgeynta, iyo suuqleyda helaya adeegyada.
Tilmaamaha 'Endorsement Guides' ee FTC ayaa sheegaya in haddii ay jiraan 'isku xirnaan maadi' ah oo udhaxeysa taageere iyo suuqgeyaha wax soo saarka - si kale haddii loo dhigo, isku xirnaanta saameyn ku yeelan karta culeyska ama kalsoonida ay macaamiishu ku siinayaan oggolaanshaha - xiriirkaas waa inuu ahaadaa mid cad oo muuqda la shaaciyey, haddii xiriirku uusan horeyba uga caddayn macnaha guud ee isgaarsiinta ay ku jirto oggolaanshaha. Warqadda FTC ayaa loo diray Mark King, Madaxweynaha Kooxda Adidas ee Waqooyiga Ameerika.
Dadka caanka ah ee Instagram ayaa wali ku xadgudba Tilmaamaha FTC
Xaqiiqdii, cilmi baaristan laga soo Mediakix, shirkad dhiseysa ololeyaal saameyn ku leh saameyn, waxay muujineysaa in 93% taageerooyinka caanka ah ee warbaahinta bulshada ee Instagram ay jabinayaan tilmaamaha FTC:
Tags: muusikadabixintaEmily Ratajkowskiqirashoftcemaylka ftcdigniinta emailka ftctilmaamaha ftcdigniinta ftcHailey Baldwinsaamayntasuuqgeynta suuqgeyntaInstagramJennifer LopezKendall JennerLindsay LohanLuke Bryanisku xirnaanta walxahaSean CombsSofia VergaraSophia BushZendaya Coleman
Ogow Isticmaalkaaga Caddaaladda ah, Shaacinta iyo IP-ga
Waa maxay Drupal?